Apple Music TV wuxuu ku fiday UK iyo Canada | Waxaan ka socdaa mac
Apple Music TV wuxuu ku fiday UK iyo Canada
Bishii Oktoobar ee la soo dhaafay, Apple ayaa soo saartay Apple Music TV si gaar ah Mareykanka, adeeg waaLa wadaag fiidiyowyada muusikada 24 saacadood maalintii, oo leh qaab u eg midka aan ka heli karno asalka MTV iyo in ka badan xilligan VH-1, Sol Music (Spain) ...
6 bilood ka dib markii laga bilaabay Maraykanka, Apple waxay fidisay helitaanka adeegan laba dal oo cusub: Boqortooyada Ingiriiska iyo Kanada. Sharadka Apple ee adeeggan ayaa ah in la gaarsiiyo labada muusikada jecel iyo kuwa ku raaxeysanaya fiidiyowyada muusikada, iyadoon lahayn nooc xayeysiis ah.
Waqtigan xaadirka ah, ma naqaano qorshayaasha aan adeeggan ugu fidinayno dalal kale, laakiin waxay noqon doontaa arrin in la fariisto oo la sugo. Madalkan, kaas oo Gabi ahaanba waa bilaash umana baahna rukumo Apple Music, waxaa laga heli karaa TV-ga Apple TV labadaba iyada oo loo marayo barnaamijka Apple Music, iyo qalab kasta oo iOS iyo macOS ah.
Haddii aad ku jirto mid ka mid ah seddexdan dal oo Apple Music horeyba looga heli jiray, waad ka heli kartaa adigoo gujinaya Baadh tabka barnaamijka Apple Music. Waxaa sidoo kale lagu heli karaa tan isku xirkaillaa inta laga heli karo waddankaaga, haddii kale waxay kuu jeedin doontaa bogga Apple TV +.
Ka sokow fiidiyowyada muusikada, barnaamijkan waxaa sidoo kale loogu talagalay in lagu sii daayo dhacdooyinka gaarka ah iyo bandhigyada tooska ah, in kastoo hadda cudurka faafa awgeed, Noocyada noocan ah wali lama helin waqti kasta.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » Noticias » Apple Music TV wuxuu ku fiday UK iyo Canada
Macaamiisha ayaa loo rabay Apple TV +. Istaraatiijiyadda cusub ayaa ah in la kordhiyo tirada filimaanta muuqaalka ah
Ma fikrad fiican baa in la iibsado MacBook Pro hadda?